GAROOWE (P-TIMES)-Ganacsatada iyo Shacabka Magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland ayaa ka cabanaya falal ammaan-darro oo kusoo badanaya magaalada, kuwaas oo ay geysanayaan dhalinyaro ku hubeysan toorey.
Ganacsatada ayaa sheegay inay bilaabatay dhaca loo geysanayo goobahooda ganacsi xilliyada maalintii iyo habeenkii ah, iyagoona sheegay in Dowladda looga baahan yahay in aysan canshuur oo kaliya u soo doonan, balse ay wax ka qabata duulaanka cusub eek u bilowday ganacsigooda.
Sidoo kale, Dadka shacabka ee kunool caasimadda ayaa sheegay in ay adkaatay haatan ku socoshada iyo ganacsiga xilliyadda habeenkii ah, ayna bilowdeen dhalinyaro koox koox u abaabulan kuwaas oo furanaya Moobilada iyo waxa ay wataan.
Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa kamid ah Magaalooyinka ugu nabdoon ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana maalmihii ugu dambeeyay isa soo tarayay kooxo dhalinyaro ah oo ku hubeysan Tooreeyo kuwaas o furanaya Dadka Shacabka ah iyo koox ku hubeysan qoryo oo furtay Xawaalado iyo goobo kale oo ganacsi.
Garowe: Shacabka Garoowe oo aragti ka dhiibtey habacsanaan Amaan oo ay dareemeen
Aragtida Shacabka Garoowe ee Amaanka "Anagoo ganacsato ah cashuurta bixina maaha in duhurkii naloosoo dhaco Dawladu hanaga qabato tuugada nagu cusub," Wariye Abdiqani Fantastic Axmed ayaa waraystay qaar kamid ah shacabka Caasimada iyo Ganacsato kala duwan.
Posted by Radio Daljir on Wednesday, August 12, 2020